‘टायम नै छैन यार, के गर्ने होला !’- ब्यस्त मान्छेकालागि मस्त उपाय… « Gajureal
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:४९
‘म एकदमै ब्यस्त छु ।’ हाम्रो सबैभन्दा हिट थेगो हो यो । भतेर खाने फुर्सद मिल्छ, सामाजिक कार्य गर्नु परे ‘म कदमै ब्यस्त छु !’ पार्टीमा जाने समय हुन्छ, मलामी जान परे ‘म एकदमै ब्यस्त छु !’ झगडा गर्न समय मिल्छ तर वार्तालाप गर्न परे ‘म कदमै ब्यस्त छु !’ सात समुन्द्रपारी अनलाईन कुराकानी गर्न टायम हुन्छ, सँगैका आफन्तसँग फनलाई गर्न ‘म एकदमै ब्यस्त छु !’ आखिर हामी किन यति ब्यस्त हुन्छौं होला !
ब्यस्त मान्छे भित्रभित्रै अस्त भैसकेको हुन्छ । ब्यस्त मान्छेको धेरै काम काम लथालिङ्ग हुन्छ । अधिकांसको खानपान अस्तब्यस्त हुन्छ, जीवनशैली छरपष्ट देखिन्छ । ब्यस्त देखिने मान्छेले भन्छ, ‘आज मुख धुने फुर्सद भएन’. ‘दांत माझ्ने समय मिलेन’, ‘फोन गर्नै भ्याईएन, ईत्यादि । सामान्यभन्दा सामान्य काम त समय नमिलाउने हामीहरु ब्यस्तचाहिं केमा हुन्छौं त ?
जेलाई हामी ब्यस्तता भन्छौं वास्तवमा त्यो अस्तव्यस्तामात्र हो । वास्तवमा हामी अस्त र ब्यस्त हैन, मस्त हुनुपर्दछ । मस्त मान्छे मलामी पनि पुगेकै हुन्छ । जन्तीपनि भ्याएकै हुन्छ । जागीर पनि चलेकै हुन्छ । खेलकुदमा पनि सहभागी भएकै हुन्छ । मनोरञ्जनपनि गरेकै हुन्छ । बिहान योग र ध्यान पनि भ्याएकै हुन्छ, बेलुका भोग र उपभोगमा पनि सहभागी भएकै हुन्छ । मस्त कसरी बन्ने त ? मस्त जिवन बाँचिरहेका एक दर्जन साथीहरुसँग अन्र्तकृया गरें । सबैको एउटै सुझाव थियो—मस्त जीवनको राज समय तालिका अर्थात् टायम सेड्यूल हो । आफनो दैनिक क्रियाकलापलाई सेड्यूलमा चलाउन जानेमा जीवन अस्तब्यस्त हैन मस्त रहने गर्दछ ।
यसको सानो प्रयास स्वरुप मैले नयाँ बर्षको पूर्व सन्ध्यामा मेरो टायम सेड्यूल सार्वजानिक गरेको छु । आशा छ, यसले तपाईंको आगामी जीवन मस्त बनाउन केही उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने छ जसरी मलाई दियो ।